Magacaabista abaalmarinta nabadda ee Nobel ee loogu talagalay dugsiyada jabiya caqabadaha Waqooyiga Ireland - Ololaha Caalamiga ah ee Waxbarashada Nabadda
October 8, 2019 Warar & Muuqaal 0
(Waxaa daabacay: The Guardian. Oktoobar 8, 2019)
Waxaa qoray Henry McDonald
Dugsiga hoose dhexe ee Hazelwood Integrated ee Waqooyiga Belfast ayaa astaan ​​u ah dadaallada la isugu keenayo magaalo kala qaybsan. Iskuulku wuxuu taaganyahay darbi adag - mid ka mid ah 59 “darbiyada nabada”, ama deyrka, oo wali kala soocaya beelaha Katooliga iyo Protestant-ka ee caasimada. Waxaa la dhisay 2008, 10 sano ka dib heshiiska jimcaha wanaagsan.
Hadda Patricia Murtagh, maamulaha Hazelwood, ayaa ka mid ah dadka u dabaal dagaya a Abaal marinta Nabadda ee Nobel Magacaabista Dhaqdhaqaaqa Iskuullada Isku-dhafan, oo la sameeyay 1970-yadii, tobankii sano ee rabshadaha badnaa ee Dhibaatooyinka Waqooyiga Ireland, si wax loo baro carruurta Katooliga iyo Protestant-ka.
Murtagh wuxuu dib u xasuusinayaa "caqabaddii nabada" ee kor u kacday, wuxuuna ku sifeeyay "dhaxal ka mid ah Dhibaatooyinkii ay bulshooyinku isugu soo urureen midba midka kale rabshaddiina ay caado ka noqotay welina ay taallo".
In kasta oo dugsigeedu ku fadhiyo khadadka cillada diimeed, Murtagh waxay tiri waxay ardayda siisaa beddel ka dhigta taaladda loo qaybinayo meel ka baxsan fasalkooda. “Dugsigan waxaa ka jira furfurnaan, rajo laga qabo sida aan isula dhaqanno - waxaan bixinnaa caqabado, waxaan soo jeedinaynaa go'aanno iyo inaan yeelanno dareen adag oo ah waxa loola jeedo muwaadin wanaagsan. Tani waa khibrad ay carruurtu leeyihiin maalin kasta iyo maalin kasta. Way isla koraan. ”
Ku dhowaad 40 sano kadib markii iskuulkii ugu horeeyey ee isku dhafan laga furey dhismeyaal kumeelgaar ah oo ay la socdaan 50 caruur ah, qaar ka mid ah ardayda asalka ah iyo aasaasayaasheeduba waxay yiraahdeen ugu dambeyntii waxay helayaan aqoonsi caalami ah oo ku aaddan horumarinta nabadda iyo dib-u-heshiisiinta bulshada wali jahawareerka ka taagan yahay.
Kaliya 7% ardayda ku jirta Northern Ireland dhigtaan iskuul isku dhafan oo buuxa, laakiin dalabku wuu sarreeyaa oo dhammaan iskuulada isku dhafan ayaa si xad dhaaf ah loo qoraa Tan iyo heshiiskii Jimcaha wanaagsan tirooyinka duuban ayaa in ka badan labanlaabmay.
Sannadkii 1998 - sanadkii heshiiskii taariikhiga ahaa ee nabadda - ilaa 12,000 carruur ah ayaa dhigatay 43 iskuul oo isku dhafan. Labaatan sano ka dib waxaa jira 65 iskuul oo isku dhafan oo ay ka badan yihiin 23,000 oo arday.
Ku soo noqo 1981, maaddaama gaajada ka dhacday xabsiga Maze ee ku lug lahayd maxaabiista IRA iyo INLA ay gaartay heerkeedii ugu sarreeyay, halka dibad baxyada diimeed ay ka sii dillaaceen, waxaa furmay iskuulkii ugu horeeyey ee isku dhafan oo ku taal daanta Belfast's River Lagan. Waxaa loo arkay inay tahay cirfiid iftiin ah, oo ah iftiin rajo leh oo ku jira jawi siyaasadeed oo mugdi ah.
Mid ka mid ah ardaydeedii ugu horreeyay, Sean Harrison, oo hadda ah 48, wuxuu dib u xusuustaa Lagan College oo ah dhisme dhar leh oo ay la socdaan 50 arday oo keliya. Waqtigaas wuxuu ku noolaa New Lodge Road, oo ku yaal dhisme munaarad ah oo ku yaal woqooyiga magaalada, degmo jamhuuriyad xoog leh oo xuduud la leh aagagga daacada u ah aagga Tigers Bay. Isaga, dhaqdhaqaaqa waxbarashada isku dhafan wuxuu bixiyay daawo hore oo looga hortago kooxaysiga.
Waxaan saaxiibo la yeeshay dhowr nin oo ka socda Tigers Bay. Macno ahaan waxay ku noolaayeen shan daqiiqo oo socod ah aniga laakiin macquul maahan in la aado aaggooda iyo taa lidkeed. Lagan wuu badalay taa. Laga bilaabo maalinta koowaad, kooxo naga mid ah ayaa ku kulmi lahaa magaalada Sabtida. Waxaan leenahay howlo bulsheed oo iskuul ah waana wax iska caadi ah in guryo walba aan ku leenaano hurdo.
Lagan wuxuu la kulmay mucaaradnimo ka timid kaniisadaha iyo siyaasiyiinta wax dhaqaale ahna ma helin seddexdii sano ee ugu horreysay. Harrison wuxuu leeyahay waalidkiis, oo ah lamaane Katoolik-Protestant ah oo shaqeeya, waxay ahaayeen "geesiyaasha dhabta ah", iyagoo u halgamayay inay iska bixiyaan kharashka waxbarashadiisa kulleejada halka kuwa u ololeeya ay u halgamayaan maalgelinta gobolka.
Wuxuu yidhi magacaabista abaalmarinta nabadda ee Nobel waa, ugu dambayntii, aqoonsiga waxqabadyada isku dhafan ee ka qayb qaadashada geeddi-socodka nabadda. "Way iga dhigeysaa mid sharaf leh markaan ka fekero naftii hurnimadaydii waalidkay iyo kuwa la midka ah ee ay sameeyeen markii aan qaaday tallaabooyinkii ugu horreeyay ee lagu jebinayo meertada kooxaysiga," ayuu yidhi.
In kasta oo dhaqdhaqaaqa isku dhafan uu wajahay mucaarad xoog leh tobannaankii sano ee la soo dhaafay, wuxuu sidoo kale ku guuleystay qaar ka mid ah xulafada caanka ah, oo ay ku jiraan Hollywood. Liam Neeson, oo ku dhashay Waqooyiga Ireland, waa taageere xoog leh, wuxuuna fariin u diray Sanduuqa Isku-dhafan ee Waxbarashada Isku-dhafan ee Waqooyiga Ireland isagoo ku sifeynaya magacaabista inay tahay "darbo weyn oo gacanta ugu jirta dhaqdhaqaaqa waxbarashada isku dhafan".
In kasta oo si gaar ah loo leeyahay, ololeeyayaashu waxay qirayaan inaysan iyagu safka hore ugu jirin abaalmarinta, waxay u arkaan magacaabista inay caddeyn u tahay hormoodka dhaqdhaqaaqa iyo dhiirrigelinta helitaanka maalgelin dheeri ah oo gobolka ah.
Tina Merron, oo ah agaasimaha guud ee Sanduuqa Isku-dhafan ee Waxbarashada, Hay'ad samafal ah oo taageerta waxbarashada isku dhafan, ayaa ka tiri magacaabista Nobel: "Waxaan jeclaan lahayn inaan aragno istiraatiijiyad sax ah oo horseed u noqota koritaanka si loo gaaro himilooyinka waalidiinta waxbarashada isku dhafan. "
Saaxiibkeed Roisin Marshall, madaxa Golaha Northern Ireland Council for Integrated Education, ayaa leh magacaabistu waxay qiraysaa "shaqada maalinlaha ah ee ka dhexjirta iskuulada isku dhafan si loogu dabaaldego isdhexgalka diinta iyo dhaqanka ee bulshadeena kala qaybsan".
Laba sano ka hor inta aan la furin Kulliyadda Lagan, halyeeyadii reer waqooyiga Irish ee Stiff Little Finger ayaa soo saaray heesta ugu caansan, Alternative Ulster, iyagoo ku baaqaya nooc kale oo bulshada ah. SLF waxay anshax ahaan iyo dhaqaale ahaanba ku taageertay sanduuqa waxbarashada isku dhafan tan iyo markaas. Jake gubasho, heesaaha hogaamiyaha ah, oo si wada jir ah u qoray heesta, wuxuu leeyahay dhaqdhaqaaqa wuxuu mudan yahay inuu guuleysto. “Laakiin xitaa haddii aysan sidaas yeelin, xaqiiqda ah in lagu aqoonsaday marxaladdaas heerka sare ah waa mid cajiib ah. Tan iyo markii aan yaraa ee ku soo barbaaray shakigii hore ee 'dhinaca kale' marwalba waxaan dareemay in sida ugu wanaagsan ee lagu jabiyo caqabadahaas ay ahayd iyaga oo aan waligoodba meesha oolin.
Tus carruurta oo dhan inay ka wada siman yihiin waxa iyaga kala qaybinaya. Inay ixtiraami karaan khilaafaadkooda, iyagoo qadarinaya iskumidkooda. ”
# Waqooyiga Ireland
Arrinta cusub ee Dib-u-eegista Waxbarashada & Colaadda ee “Aragtiyaha iyo qaab-dhismeedka fikradeed ee waxbarashada, isku dhaca iyo nabad-dhisidda”
Abaalmarinta Abaalmarinta Waxbarashada Nabadda 2017 waxaa la siiyay Kulliyadda Isku-dhafan ee New-Bridge
June 10, 2017 Warar & Muuqaal 0
New-Bridge Integrated College ee Loughbrickland, Waqooyiga Ireland, waa abaalmarinta Abaalmarinta Dhacdooyinka ee Waxbarashada Nabadda 2017. Abaalmarinta sannadlaha ah ee sannadlaha ah ee Yurub, Evens Foundation waxay raadisay istiraatiijiyado laga hirgeliyey dugsiyada sare si loola macaamilo 'mawduucyada kulul' ee wax dhisidda jidka.
Ku xoojinta nabadda waarta iyadoo loo marayo Awood siinta dhalinyarada (Myanmar)
August 17, 2019 Warbixinnada Waxqabadka 0
Machadka Horumarinta Naushawng wuxuu waday tababaro isdaba joog ah oo ku saabsan waxbarashada madaniga iyo nabada iyadoo ujeedadu tahay in kor loo qaado xirfadaha dhalinyarada iyo in la kordhiyo kaqeybgalkooda geedi socodka nabada ee Myanmar. [sii wad akhriska…]
Khubaradu waxay ku baaqayaan in qaab cusub loo wajaho geeddi-socodka nabadda ee Koonfurta Suudaan
July 5, 2017 Warar & Muuqaal 0
Khubaradu waxay ugu baaqeen bulshada caalamka inay wax ka beddelaan istiraatiijiyaddooda dhexdhexaadinta ee Koonfurta Suudaan oo ay dagaalo ka socdaan isla markaana la waafajiyo qaab cusub. Qaarkood waxay ku baaqeen in la xoojiyo waxbarashada nabadda, hoggaaminta dimoqraadiga ah ee dastuurka iyo abaabulka aqoonta si loo beddelo cilaaqaadka muwaadinka iyo dabeecadaha si looga fogaado loona niyad-jebiyo adeegsiga rabshadaha si loo xalliyo cabashooyinka. [sii wad akhriska…]